Imbopheleleko yokuhlawula umonakalo kwabamsulwa basePalestina - uRabi uMichael Avraham
Imbopheleleko yokuhlawula imbuyekezo yomonakalo kwabamsulwa basePalestina
Iimpendulo > Udidi: Ngokubanzi > Imbopheleleko yokuhlawula imbuyekezo yomonakalo kwabamsulwa basePalestina
Iphayina Ubuzwe kwiinyanga ezi-5 ezidlulileyo
Ngaba kukho umsebenzi kwiLizwe lakwaSirayeli lokubuyisela abantu basePalestina abamsulwa abaye benzakaliswa zizenzo zeLizwe lakwaSirayeli ngokuchasene neHamas?
Kwaye omnye umbuzo, ukuba uyawa Impazamo Kwisenzo somkhosi othile, nangenxa yempazamo eyenziwa nguPalestine, ngaba kukho imbopheleleko yokumbuyekeza?
Kwinqaku lam malunga nengxaki yodonga olukhuselayo (umntu kunye noluntu), isiphelo kukuba ukuba ngumntu wesithathu (ongeyena wasePalestina) onzakaliswe yizenzo zethu, ndiza kuthi ewe, kwaye ke iHamas inokumangalelwa. umonakalo. Kodwa kwimeko yamaPalestina, kubonakala kum ukuba kufuneka bajike ngokuthe ngqo kwiHamas, ebalwelayo kwaye umsebenzi wabo uya kubahlawulela. Kanye njengokuba kungekho mfuneko yokuba sibuyekeze abantu esilwa nabo ngamajoni athe angxwelerheka edabini ngokungeyomfuneko. Kuye kwathiwa xa kukho imfazwe, iichips ziyatshiza.
Iphayina Uphendulwe kwiinyanga ezili-5 ezidlulileyo
Ndiyakhumbula kodwa kwakhona wabhala apho ukuba ukuba otshutshiswayo unako ukumsindisa umtshutshisi kwelinye lamalungu akhe kwaye akazange asindise ngoko kufuneka. Kutheni le nto ingavumelekanga nalapha malunga neempazamo?
mikyab Abasebenzi	Uphendulwe kwiinyanga ezili-5 ezidlulileyo
Okokuqala, ngubani owathi yimeko awayenokuyisindisa? Kukho iimbacu ezisesichengeni ezingenakuphepheka. Okwesibini, nokuba kukho indlela yokuphepha kule meko ethile iimpazamo zenzeke kwaye ziyinxalenye yendlela yehlabathi emfazweni.
Indlela kaMaimonides yeyokuba ukubulala okunjalo akunyanzelekanga. Akuvumelekanga kodwa akanguye umbulali. Indlela yeThos nguewe.
UHasbra uthi ukuba ndonakalise impahla yomnini ngempazamo akunyanzelekanga ukuba ndimbuyekeze. Kwaye abanye bokuqala nowokugqibela babhala ukuba ekutshutshisweni ngokwakhe akukho sithintelo sokubulala naxa enokuthi amsindise kwelinye lamalungu akhe. Oku kuthethwa kuphela malunga nomntu wesithathu.
Ukuba kukho isiganeko apho omnye wabathunywa belizwe lakwaSirayeli (ijoni / ipolisa) watenxa waza wenza isenzo esikhohlakeleyo kummi wasePalestina (masithi ijoni lidlwengule umPalestine). Kwimeko enjalo, ngaba kukho imbopheleleko yeLizwe lakwaSirayeli yokubuyekeza ixhoba elifanayo lolwaphulo-mthetho?
Ndicinga njalo. Kukho ke indawo yokumangalela ijoni eliza kubuyisela imali kurhulumente. Kodwa wenza ngokwegunya namandla (igunya kunye nezixhobo) awamnika zona, ngoko uxanduva lwakhe ngezenzo zakhe.
Ukuba udlwengulwe ngelize, kungengamandla ezixhobo okanye igunya alifumeneyo kodwa njengayo nayiphi na enye indoda, ngoko ke ngokoluvo lwam ibango lilobuqu ngakuye kwaye akukho sinyanzelo kurhulumente ukuba ahlawule.
Ngokuphathelele uxanduva lombuso, luhamba njani na ngale nto uyibhale ngasentla yokuba urhulumente akanatyala ngeempazamo zakhe, kanti apha nguye ojongene nobubi babathunywa bawo (ekuthi ngokwembono yombuso ayinguye. ithathwa njengekhohlakeleyo).
Ngenxa yokuba kukho intetho ngomonakalo owenziwe emfazweni, kwaye ngenxa yoko akukho xanduva kuba kukho umthetho odibeneyo wokutshutshisa. Kodwa isenzo nje esingenanjongo esingeyonjongo yemfazwe ngokuqinisekileyo sinomsebenzi wokubuyekeza. Akukho mthetho utshutshisayo apha.
Ityala elifanayo liyaziwa ukuba ngo-2000 uMustafa Dirani wamangalela uRhulumente wamaSirayeli ngenxa yomonakalo, esithi uye wafumana amatyala amabini okuxhatshazwa ngokwesondo ngabaphenyi bakhe. Phakathi kwezinye izinto, isityholo sityhola ukuba umkhulu kwiYunithi 504, owaziwa ngokuba ngu”Captain George,” wazifaka ezi mpundu kuDirani. Ngokutsho kukaDirani, ebudeni bokuncinwa kwakhe wangcungcuthekiswa, kuquka ukungcangcazela, ukuhlaziswa, ukubethwa, ukuphuthelwa, nokubotshelelwa kwindawo yokuguqa iiyure ezinde, yaye ngenxa yokuthotywa kwakhe wancinwa ngoxa ehamba ze . Iiteyiphu zophando, ezifotwe yiYunithi 504, zaboniswa kwinkqubo kamabonakude ethi "Fact" nge-15 kaDisemba 2011.  Kwenye yeevidiyo, umcuphi uGeorge ubonwa ebiza omnye wabanye abaphandi emyalela ukuba asonge ibhulukhwe yakhe kuDirani kwaye agrogrise uDirani ngokudlwengulwa ukuba akanikezeli ngolwazi. 
NgoJulayi 2011, iNkundla ePhakamileyo yagweba, ngokoluvo oluninzi, ukuba uDirani unokuqhubeka nokulandela ibango lokugwetywa alifake kwi-State of Israel, nangona ehlala kwilizwe lotshaba, waze wabuyela ekubandakanyekeni kumsebenzi ochasayo ngokuchasene nelizwe.  Ngesicelo sikarhulumente, kwaphinda kwabanjwa olunye udliwanondlebe, kwaza ngoJanuwari 2015 kwagqitywa ukuba ibango likaDirani lichithwe, kuba emva kokuba uDirani ekhululwe eluvalelweni wabuyela kumbutho wabanqolobi onjongo yawo yayikukuthatha amanyathelo ngakurhulumente. ade ayitshabalalise.
Kuyabonakala kule nto ukuba kukho ukufaneleka kumbuzo wokuba ummangali uhlala kwindawo yotshaba okanye hayi. Ndiyakhumbula kwakhona ukuba kukho ummiselo osusela kwimihla yomthetho waseBritane obambe ukuba utshaba alunakumangalela.
Iimpendulo zam azikho semthethweni (andiyoncutshe kumthetho wamazwe ngamazwe). Ndathetha uluvo lwam kwinqanaba lokuziphatha.
UDirani yena, ingxaki yayingekokuba wayehlala kwilizwe lotshaba kodwa yayilutshaba olunamandla. Nabani na ohlala kwilizwe lotshaba ngokuqinisekileyo unokuthi afune imbuyekezo, kodwa kuphela ukuba kukho into eyenziwa kuye ngokungekho mthethweni kwaye kungekhona kwimeko yemfazwe (oko kukuthi ngengozi ukulimaza abantu abamsulwa). Ndiyaqikelela ukuba ezi ntuthumbo azenzelwanga nje ukumxhaphaza kodwa ukukhupha ulwazi kuye. Ngoko ke ezi zizenzo zemfazwe. Ukuba bebesandula ukumxhaphaza, nokuba kukwiziko le-GSS njengenxalenye yophando, ngoko ke nanjengoko utshaba wayenokuba nako ukucela imbuyekezo, yaye yingxoxo eyayiqhubeka apho.
Hi ndlela leyi, ingxabano yokuba ukuba wenza isenzo sokutshabalalisa urhulumente imhlutha ilungelo lokusebenzisa amaziko ayo isandi ngokusemthethweni ethandabuzekayo. Lonke ijoni elilutshaba (elithinjiweyo) likwimeko enjalo, kwaye ndiyaqikelela ukuba akukho mntu unokuthi ngejoni. Bayithetha le nto ngoDirani kuba ungumnqolobi.
Ngaphezu koko, kukho ingxabano apha: ukuba ukuxhatshazwa kwahamba ngaphaya kwezinto ezivumelekileyo okanye zenziwa ngenjongo yodwa yokuxhatshazwa, ngoko nangona uDirani akanalo ilungelo lokumangalela urhulumente kufuneka ahlolisise kwaye ajezise abo benza njalo (isohlwayo solwaphulo-mthetho, nokuba uDirani utshutshiswe njani). Kwaye ukuba abazange baphambuke - ngoko kubaluleke ntoni ukuba ulutshaba. Akukho sizathu samanyathelo.
Ukuhlawula abanqolobi ngembuyekezo Uphendulwe kwiinyanga ezili-5 ezidlulileyo
B.S.D. XNUMX kwisizwe seP.B
Kubonakala ngathi imibutho yabanqolobi kwizenzo zabo zokubulala i-IDF kufuneka ithathe amanyathelo okuzikhusela kunye nokukhusela yiyo eboleka imbuyekezo yomonakalo owenziwe ngexesha lomlo kubantu abangenatyala, amaYuda nama-Arabhu.
ukwakhiwa Vula Ngaba iLehavah ngumbutho wocalucalulo? (Uluhlu lwama-484)
Umahluko phakathi kweZionism yenkolo kunye ne-ultra-Orthodoxism Vula UkuPhakamisa nokuwa kukaBennett kunye neentsingiselo zabo (uKholamu 486)